अति नै मार्मिक कथा, मन थामेर नरोई पढ्नुहोला ! शेयर गरी अरुलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोस् । – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/अति नै मार्मिक कथा, मन थामेर नरोई पढ्नुहोला ! शेयर गरी अरुलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोस् ।
शारीरिक सम्बन्धका क्रममा पार्टनरलाई ‘छुरा प्रहार’ ! कारण सुन्दा परिन्छ चकित